आफूले पढ्न नपाएपछि अरू दृष्टिविहीनका लागि बनाइन् ‘अडियो बूक’
व्यक्तित्व अनिता श्रेष्ठ
ब्रेल लिपिमा नलेखिएकैले अतिरिक्त किताब पढ्न नपाएकी सरिता अर्यालले दृष्टिविहीन बालबालिकालाई १२५ वटाभन्दा बढी ‘अडियो बूक’ तयार पारिसकिन्।
सगरमाथामा ५ वैशाख २०७१ मा १६ जनाको ज्यान लिएको खुम्बु हिमपहिरोले पासाङ कान्छी शेर्पालाई कानून व्यावसायी बनायो।
‘कसैले एक डोज पनि नपाउँदा अन्यलाई बुस्टर डोज दिनु न्यायोचित होइन’ ओमिक्रोन भेरियन्ट, बुस्टर डोज र कोभिड-१९ महामारीका बारेमा अमेरिकाको मायो क्लिनिकमा अनुसन्धानरत जीवाणु वैज्ञानिक डा. सुदीप खड्कासँग हिमालखबरका सागर बुढाथोकीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
जसले आफैंले लेखेको पुस्तक पढेर स्नातकोत्तर गरे आफैंले लेखेको पुस्तक पढेर स्नातकोत्तर तहको परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने सुअवसर कमै विद्यार्थीलाई प्राप्त होला। त्यस्ता भाग्यमानी विद्यार्थीमा पर्छन्- इतिहासकार नयनाथ पौडेल।
बच्चुकैलाश : नेपाली सङ्गीतबाट हराउने अन्तिम आवाज अम्बर गुरुङले सन् १९६३ तिर दार्जीलिङमा एकदिन मसँग भन्नुभएको थियो- काठमाडौंमा एक जना गायक छन्, जो बडा असाधारण छन्। उनी गाउन थाल्दा, आँखा चिम्म गर्छन्, ध्यान गरे झैं र अन्तिम नोट सिद्धिसकेपछि मात्रै आँखा खोल्छन्।
सिल्भाँ लेभीको नेपाल नाता कोठाभित्र बसेर पूर्वीय संस्कृतिको अध्ययन गर्ने विद्वान्‌हरूको त्यस बेलासम्मको चलन तोड्ने पहिलो व्यक्ति सिल्भाँ लेभी भए।
उनी मिर्गौलाको खोजीमा छन्
व्यक्तित्व मनीषा गाैचन
धीरेन्द्र आफ्नी जीवनसँगिनी बचाउन मनमुटुले लागिरहेका छन्। उनको मिर्गौला ‘म्याच’ हुन्थ्यो भने उतिवेलै उनकी श्रीमती सोनुले नयाँ जीवन पाउँथिन्। अनि धीरेन्द्रजीको हातमा हात राख्दै जिन्दगीका जस्तासुकै बाधा अड्चनहरू मिलेर फुकाउँथे होला।
शोकले बनायो सफल साइकल व्यवसायी
मेरुदण्डमा चोट लागेपछि रूपेश श्रेष्ठलाई झण्डै झण्डै पक्षघात भएको थियो, उनको व्यवसाय पनि टाट पल्टिनेवाला थियो। स्थिति योभन्दा खराब हुनसक्दैन भन्ने के लागेको थियो, क्यान्सरका कारण उनले श्रीमती नै गुमाउनुपर्‍यो।
‘हटस्पट’ की प्रहरी कमाण्डर
कोरोनाभाइरस संक्रमणकाे 'हटस्पट' बनेकाे प्रदेश २ मा पर्सा जिल्ला सबैभन्दा बढी प्रभावित छ। भारतसँगको खुला सिमाना र प्रमुख व्यापारिक नाका भएकाले अनियन्त्रित आउजाउका कारण यो जिल्लामा साउन पहिलो सातापछि संक्रमण दर ह्वात्तै बढ्यो।
पूर्व गोर्खा सैनिकको अनुभव– बेलायतबाट स्वतन्त्र भएपछि भारतीयले साह्रै हेपे बेलायतले राज गरेको भारतमा गोर्खा सेनामा सामेल भई युद्ध लडेका र भारतको स्वतन्त्रतापछि हेपिएको महसूस गरेर गोर्खा पल्टनमा विद्रोह गरेका नारायणसिंह थापा सकेसम्म भारतीय भूमि टेक्दैनन् ।
सरकारी सेवामा पहिलो महिला माहुत हिमानी भन्छिन्- महिला कोही माहुत नबनून् ! कक्षा १० मा पढ्दै गर्दा लोकसेवा आयोगमा नाम निकालेकी पहिलो महिला माहुत हिमानी थारु कामका क्रममा भोग्नुपरेको असहयोग, असुविधा र दुर्व्यवहारका कारण यो पेशाप्रति असन्तुष्ट छिन्।